Rasaas caawa laga maqlya Gudaha Magaalada Bosaaos | maakhir.com
Rasaas caawa laga maqlya Gudaha Magaalada Bosaaos
March 19, 2008 in Somalia
Bosaaso:- Waxa caawa hadheeyay Gudaha Magaalada Bosaaso Rasaas teel teel ah taasi oo aan la aqoon ujeekeeda, Rasaatan ayaa inta badan waxay ka dhacaysay Xaafaa Raf iyo Raaxo ee ku taala dhinac Bari ee Magaalada Bosaaso, dadka xaafadaasi Degan ayaa soo sheegaya inay maqlayaan dhawaqa Rasaasta iyaga oo dadkaasi qaarkood arinkaasi walaac xun ka muujiyay.
Waxa jira inay Rasaastaasi soconaysa mudo dheer iyada oo ay jiraan cabsi xoogan oo laga qabo in dagaal ka dhex qarxo gudaha Magaalada Bosaaso, dadka ayaa caawa aad u hadal haya rasaastaasi oo ah mid aanay mudo dhegohoodu maqal.
Rasaastaasi caawa hadhaysay Gudaha Magaalada Bosaaso ayaa waxa dadka qaaerkiis ay ku macneeyeen inay tahay, dagaal dhex maray Ciidamada Booliska ee Magaalada Bosaaso iyo malayshiyo Beeleedyo isku uruursanayay mudooyinkan Bari Magaalada Bosaaso.
Malayshiyo beeleedkaasi ayaa is uruursigooda waxay timi ka dib markii dhawaan Madaxwayne Cade Muuse Amar ku bixiyay in La qaado Warshada Lacagta daabacda ee ka dhisan gudaha magaalada Bosaaso iyada oo la faray Booliska Magaalada Bosaaso inay warshadaasi dhigaan gudaha Bankiga magaalada Bosaaso.
Arinkaasi ka soo yeedhay Cade Muuse ayaa waxa ay dhalisay cadho xoogan iyada oo Hantiilayaasha warshadaasi ay bilaabeen inay isku keenaan Cudud iyo ciidan kuwaasi oo ciidamo badan isugu geeyay Tuulada Al- Xamdulilha ee u jirta Magaalada Bosaaso 130-Km,waxayna wacad ku mareen inay qas iyo fooda ka Abuurayaan gudaha Magaalada Bosaaso.
Warar dheeraad ah ayaa sheegaya inay ciidamadii joogay Tuulada Al-Xamdulilaha ay soo galeen Gudaha Magaalada Bosaaso kuwaasi oo haatan saldhig ka samaytay Xaafada Raf iyo Raaxo ee ku taala Bariga magaalada Bosaaaso.
Waxa jira cabsi xooga oo laga qabo in Amaanku faraha ka baxo gudaha Magaalada Bosaaso ka dib markaa argto ciidamada farah badan ee jooga wadooyinka magaalada Bosaaso iyo waliba Dilalka joogtadah ee dhacay habeenkasta.
Saraakiisha Amaanku had iyo jeer waxay sheegayaan inay Gacan bir ah ku qabanayaan cid Alaale cidii Nabada Maamulka Puntland Majaxaabinaysa walaw aan wali Isha Dad waynu qaban talaaba ay qaadeen ciidamada Nabad sugida ee Maamulka Puntland.
« Maamulka S/land ayaa Cafis u fididyay Maxaabiis Dagaal
OGEYSIIS IYO WARGELIN]:- Shir aad u muhiim u ah oo ka dhacaya London iyadoo lagu xusi doono shirkan cid la siinayo contract-ga dhisida Dekeda Laasqoray »